ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သက်ရင် ဘယ်အရာမှ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သက်ရင် ဘယ်အရာမှ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သက်ရင် ဘယ်အရာမှ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး
သစ်ပင်တစ်ပင်ရှေ့ ကိုယ်အမြဲဖြတ်တယ်။ အဲဒီသစ်ပင်မှာ တစ်ခြားသစ်ပင်လိုပဲ စိမ်းစိုတဲ့ သစ်ရွက်တွေရှိတယ်။ ပန်းပွင့်တွေရှိတယ်။ အဲဒီသစ်ပင်က ကိုယ့်အတွက် ဘာမှမထူးခြားလို့ သတိမထားခဲ့မိဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ရက်မှာ အဲဒီသစ်ပင်ရှေ့
ကိုယ်ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်မိတယ်။ မရည်ရွယ်ဘဲ အပင်ပေါ်က အရွက်တစ်ရွက်ကို ဆိတ်ပြီး ချေမွကြည့်တယ်။ တခဏအတွင်း သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့တစ်ခု လေထဲ လွင့်ဝဲလာခဲ့တယ်။ မွှေးကြိုင်တဲ့ရနံ့ကို ကိုယ်ရှုရှိုက်မိပြီး ဒီသစ်ပင်ဟာ သံပရာ(ရှောက်)ပင် ဆိုတာ
ကိုယ်သိလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လေထုမှာ သံပရာရနံ့က သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်နေခဲ့တယ်။ နောင်နောက် သစ်ပင်ရှေ့ ကိုယ်ဖြတ်တိုင်း အဲဒီသစ်ပင်က အရင်ကလို ကိုယ့်အတွက် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ မနေခဲ့တော့ဘူး။
သံပရာပင်ကို ချည်းကပ်သလိုမျိုး အရင်က ကိုယ်တကယ် မသိ၊ နားမလည်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ချည်းကပ်ပါ။ သူတို့ဆီကနေ မွှေးကြိုင်တဲ့ရနံ့တွေ ထွက်လာနိုင်ပြီး ကိုယ်တို့ကြားမှာ လွင့်ဝဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မနက်အိပ်ရာထတိုင်း ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်က ကိုယ့်အတွက် မရှိမဖြစ်ပါ။ ကော်ဖီတွေလည်ချောင်းတစ်လျှောက် စီးဆင်းသွားမှ ကိုယ့်ဦးနှောက်တွေ ကြည်လင်လာတယ်။ ကော်ဖီသောက်သလိုပဲ….. ခါးသီးတဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးမှ ကိုယ့်အတွေးတွေ ကြည်လင်လာနိုင်တယ်။ အမှားအမှန် ခွဲခြားလာနိုင်တယ်။ စိတ်ထိခိုက် နာကျင်ခံစားဖူးမှ ကြံ့ခိုင်မှုကို သင်ယူနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ထိခိုက်နာကျင်ခဲ့သမျှကို အထက်တန်း ကော်ဖီမှုန့်လို့ သတ်မှတ်ပြီး စဉ်းစားဆင်ခြေဥာဏ်ဆိုတဲ့ ရေပူပူထဲ ထည့်ဖျော်လိုက်ပါ။ အဲဒီကော်ဖီခါးနဲ့ ကိုယ့်ဦးနှောက်၊ ကိုယ့်အတွေးအိမ်ကို ကြည်လင်ပါစေ။
ကိုယ်ဟာ ရေမွှေးတစ်ပုလင်း ဆိုပါစို့။ ဘယ်လိုရေမွှေးနံ့မျိုး ဖြစ်ချင်သလဲ?
ဘယ်လိုရနံ့မျိုးကို ကိုယ်ကြိုက်သလဲ? ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖော်စပ်သူ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့ ရနံ့ထဲ ရွတ်နောက်နောက် ရနံ့ရောထည့်မလား?
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရနံ့ကို နေ့လယ်သုံးပြီး လျှို့ဝှက်တဲ့ရနံ့ကို ညမှာသုံးမလား?
ရေမွှေးရဲ့ ထူးခြားချက်က ဖော်စပ်သူရဲ့ လက်ထဲမှာရှိသလို ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်က ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို လူတွေအပေါ် လတ်ဆတ်ကြည်လင်၊ စွဲမက်အောင် ကောင်းကောင်းဖော်စပ် (ပြုပြင်)သင့်တယ်။
လူတွေနှစ်သက်တဲ့ ရေမွှေးတစ်ပုလင်းဖြစ်အောင် နေထိုင်သင့်တယ်။
သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာတဲ့ဒီမိုးကြောင့် အချိန်အတော် လင့်ခဲ့ရတယ်။ အဝတ်အစားတွေလည်း မခြောက်သေးဘူး။ စိတ်လည်း စိုထိုင်းလို့…. လာ…. စိတ်လန်းဆန်းတဲ့ နည်းတစ်ခု ပြောပြမယ်….
ရေနွေးတစ်ဇလုံထည့်ပြီး ခေါင်းလျှော်ပါ။ ခေါင်းထဲက စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကို အဖြူရောင် အမြုပ်ဖြစ်အောင် လျှော်ဖွပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ရေနွေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ စိတ်ကို ကပ်ကပ်စီးစီးဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေ ရေတွေကတစ်ဆင့်၊ ရေမြောင်း၊
ရေချောင်းထဲ စီးဆင်းသွားပါစေ… အဲဒီနောက် ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာ ထိုင်ပြီး သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကို ဖြီးလိုက်ပါ။
ခေါင်းသားကနေတစ်ဆင့် ဦးနှောက်ထဲက အတွေးတွေပါ သန့်ရှင်းကြည်လင်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင့် သင်ခံစားမိလိမ့်မယ်။
အဲဒီရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်က မသောက်ဘဲ ကြာကြာထားလို့ အေးသွားခဲ့ပြီ။ အေးစက်တဲ့ ရေနွေးကြမ်းမှာ မွှေးကြိုင်တဲ့ လက်ဖက်ခြောက်နံ့ မရှိတော့ဘူး။ ရေနွေးအိုး သံချေးနံ့ပဲ ရတော့တယ်။ အဲဒီလို အေးစက်တဲ့ ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်ကို
အဲဒီလိုပဲ အသည်းနှလုံးတစ်ခု ကြာကြာလျှစ်လျှူရှူခံရရင် တဖြေးဖြေးအေးစက်သွားတတ်တယ်။ အေးစက်တဲ့ နှလုံးသားတစ်ခု ပြန်နွေးထွေးဖို့က ခက်တယ်။ ပြန်နွေးထွေးခဲ့သည်ထားဦး အရင်ကလိုကြင်နာတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခု မဟုတ်တော့ဘူး။
အေးစက်သွားတဲ့ အခြေအနေ၊ ဆက်ဆံမှုတစ်ခု နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ လုပ်လို့ရနိုင်မလား?
ပြန်ဖြစ်ချင်ရင် အသစ်ကနေပဲ ပြန်စလို့ ရနိုင်တော့မယ်။ စိတ်သဘောထားအသစ်၊ အကျင့်စရိုက်အသစ်နဲ့ နှစ်ဦးကြားက ဆက်ဆံမှုအသစ်တစ်ခုကို စတင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်နိုင်၊ မလှုပ်နိုင် မသေချာလှဘူး။
အေးစက်တဲ့ ရေနွေးကြမ်းတစ်အိုးလုံးကို သွန်ပြီး .. .. အသစ်ထပ်လဲလိုက်သလိုပေါ့။
တစ်ခါတလေ မေ့လျော့တာက ကိုယ်ကို ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ သယ်ဆောင်လာပေးတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို ထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်တဲ့အချိန်..အဲဒီနာကျင်ခြင်းတွေကို မေ့ထားလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကို ထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်သူကကိုယ့်ကို မလိုမုန်းထားလို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီထိခိုက်တာကို စိတ်ထဲထားပြီး
တမြေ့မြေ့ခံစားနေတာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှိပ်စက်နေတာဖြစ်တယ်။ သူက ကိုယ့်ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်ခဲ့ပြီပဲ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီနာကျင်တာကိုစိတ်ထဲထားပြီး သူကိုယ့်အပေါ် ပြုမှုခဲ့တာကို တသသနဲ့ ခံစားနေဦးမလဲ!
ဒါကြောင့် မှတ်ဥာဏ်မကောင်းသူက တစ်ခြားလူထက် ပိုပျော်ရွှင်ကြသလို လူများတွန်းတိုင်းလဲသူ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။
ကြည့်မှန်က ကိုယ်နဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းလား? ရန်သူလား?
မှန်ကိုကြည့်တဲ့အချိန် ကိုယ့်ကို ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်လား?
ရွံ့မုန်းစရာကောင်းတယ်လို့ ထင်လား? မှန်တစ်ချပ်ကို ယူပြီး သေချာကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အလှဆုံးအပြုံးကို ပြုံးပြီး မှန်ထဲကအရိပ်ကို “နင်အရမ်းလှတယ်၊ နင်ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့… အရာအားလုံးကို ဒီနေ့မှာ အဆင်ပြေပြေကျော်ဖြတ်မယ်” လို့ ပြောပါ။
တကယ်ပဲ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သက်ရင် ဘယ်အရာမှ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။